အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုကနေရရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးမုဒိမ်းကျင့်-ဒဏ္ဍာရီအရတော့ယုံကြည်ချက်: အရက်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထသက်ရောက်မှု (2006) - သင့်ရဲ့ဦးနှောက် Porn တွင်
Davis က, ကယ်လီ Cue, Jeanette Norris က, William H. ဂျော့ခ်ျ, ယောလ Martell နှင့်ဂျူလီယာ R. Heiman ။
Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ် 21 မရှိ။9(2006): 1208-1223.
ယခင်သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအမြိုးသမီးမြားအကွမျးဖညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုကနေထိခိုက်သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးခံရသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းနှိုးဆွဖို့အမြိုးသမီးမြားရဲ့စူးရှသောတုံ့ပြန်မှုအပေါ်တစ်ဦးအလယ်အလတ်အရက်ထိုးခြင်းနှင့်အရက်ကိုမျှော်လင့်များ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ရန်စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးလူမှုရေးသောက် (တစ်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာN = 134) တစ်ဦးအရက်အုပ်ချုပ်ရေး protocol ကိုဖြည့်ပြီးနောက်တစ်ဦးကာမမုဒိမ်းကျင့်ပုံဖော်တင်ဆက်ဖတ်ပါ။ ခန့်မှန်းသည့်အတိုင်းမူးယစ်သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏သမ္မာသတိရှိကြလော့များထက်မုဒိမ်းမှုအဖြစ်ပုံဖော်ဖြစ်ရပ်များတံဆိပ်ကပ်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကလမ်းကြောင်းသရုပ်ခွဲမော်ဒယ်နှိုးဆွဖို့သင်တန်းသားများကို '' Self-အစီရင်ခံလိင်စိတ်နိုးထကြောင်း, အရက်သောက်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကလွှမ်းမိုးအဖြစ်တိုးမြှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုဒဏ္ဍာရီထဲမှာသားကောင်များ၏အရတော့သဘောထားအမြင်ရလဒ်နှင့်မုဒိမ်းမှုအဖြစ်အဖြစ်အပျက်များတံဆိပ်ကပ်ခြင်းလျော့နည်းသွားရုပ်ပြ။ တွေ့ရှိချက်များကိုအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုကာလအတွင်းစူးရှသောအရက်မူးယစ်နောက်ဆုံးမှာမုဒိမ်းကျင့်ခြင်းနှင့်မုဒိမ်းကျင့်ခံရသူဆီသို့ပိုပြီးရှိရာသို့ သွား. သဘောထားတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Cohen ကို, ဂျေ, Cohen ကို, P. , အနောက်, စင်ကာပူဒေါ်လာ, & Aiken, LS (2003) ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံများအတွက်အမျိုးမျိုးသောဆုတ်ယုတ်ခြင်း / ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (၃ ed) ကိုအသုံးချခဲ့သည်။ Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum ။ Google Scholar
Corne, အက်စ်, Briere, ဂျေ, & Esses, LM (1992) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများ၏သဘောထားနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ်၊ ၇၊ ၄၅၄-၄၆၁ ။ Google Scholar
Cowan, G. အ, & ကမ့်ဘဲလ်, RR (1995) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအဓမ္မပြုကျင့်မှုသဘောထား။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 32, 145-153 ။ Google Scholar
Crowe, LC, & ဂျော့ခ်ျ, WH (1989) ။ အရက်နှင့်လိင်: ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပေါင်းစည်းမှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 105, 374-386 ။ Google Scholar Medline
ဂျော့ခ်ျ, WH, Cue, KL, လိုပက်ဇ်, PA, Crowe, LC, & Norris က, ဂျေ (1995) ။ ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြသောအရက်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြ postdrinking ။ အသုံးချလူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 25, 164-186 ။ Google Scholar
ဂျော့ခ်ျ, WH, & Stoner, SA (2000) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်စူးရှသောအရက်သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ခြင်း။ လိင်သုတေသန၏နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်, 11, 92-124 ။ Google Scholar Medline
Leigh, ဘီစီ (1990) ။ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအရက်ကိုမျှော်လင့်၏ဆက်ဆံရေး။ စွဲလမ်းမှု, 85 ဗြိတိသျှဂျာနယ်, 919-928 ။ Google Scholar Medline
Malamuth, မိုင်, & Check, JVP (1980) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းနှင့်ပုံဖော်ခြင်းကိုသဘောတူခြင်း - အမျိုးသမီး၏နှိုးဆွမှု၏အရေးကြီးပုံ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 89, 763-766 ။ Google Scholar Medline
Malatesta, VJ, Pollack, RH, Crotty, TD, & Peacock, LJ (1982) ။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအော်ဂဇင်တုံ့ပြန်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 18, 1-17 ။ Google Scholar
Mayerson, SE, & တေလာ, DA (1987) ။ မုဒိမ်းမှုဒဏ္pornာရီဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများသည်အမျိုးသမီးများ၏သဘောထားများနှင့်လိင်အခန်းကဏ္ stere ပုံစံ၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ role အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ လိင်အခန်းကဏ္,, 17, 321-338 ။ Google Scholar
Norris က, ဂျေ (1994) ။ အရက်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်: မျှော်လင့်ထားနှင့်အန္တရာယ်များမှာတစ်ဦးကကြည့်။ အရက်ကနျြးမာရေးနှင့်သုတေသနကမ္ဘာ့ဖလား, 18, 197-201 ။ Google Scholar
Norris က, ဂျေ, Davis က, KC, ဂျော့ခ်ျ, WH, Martell, ဂျေ, & Heiman, JR (2004) ။ အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားအမျိုးသမီးများ၏တုန့်ပြန်မှုကိုဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်သားကောင်၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ။ လပတ်အမျိုးသမီးများ၏စိတ်ပညာ, 28, 59-69 ။ Google Scholar
Norris က, ဂျေ, & Kerr, KL (1993) ။ အရက်နှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ခွင့်ပြုချက်မရသောခွင့်ပြုချက်မရသောခွင့်ပြုချက်များ။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်, (ပျော့ပျောင်း 11), 118-127 ။ Google Scholar
ငွေရတတ်သောသူ, အက်ဖ် (2001, မေလ 20) ။ အဆိုပါအဝတ်အချည်းစည်းအရင်းရှင်။ New York Times မဂ္ဂဇင်းရဲ့, 51-51 ။ Google Scholar
Senn, CY, & Radtke, HL (1990) ။ အကြမ်းဖျဉ်းညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်သားကောင်များ, 5, 143-155 ။ Google Scholar Medline
သံမဏိ, CM, & ဂျိုးဇက်, RA (1990) ။ အရက် myopia: ၎င်း၏တန်ဖိုးနှင့်အန္တရာယ်သက်ရောက်မှု။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်, 45, 921-933 ။ Google Scholar Medline
သံမဏိ, CM, & Southwick, အယ်လ် (1985) ။ အရက်နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူငါ - ယစ်မူးနေသောပိုလျှံမှု၏စိတ်ပညာ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 48, 18-34 ။ Google Scholar Medline
စတော့အိတ်, WE (1996, သြဂုတ်လ) ။ ညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပျြောမှေ့စနှင့် coercive အတွေ့အကြုံများကို။ စက္ကူအမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး, တိုရွန်တို, ကနေဒါ၏အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
Wilson, GT, & Lawson, DM (1976) ။ အမျိုးသမီးများတွင်လိင်မှုကိစ္စဖြစ်ပေါ်စေရန်အရက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 85, 489-497 ။ Google Scholar Medline
Wilson, GT, & Lawson, DM (1978) ။ အမျိုးသမီးများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ၊ အရက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 87, 358-367 ။ Google Scholar Medline